Amadoda anempandla adumileyo | Amadoda aneSitayile
UAlicia tomero | 27/10/2021 10:00 | fashion, Imizila
Kweli candelo siza kuthetha ngalo amadoda anempandla adumileyo. Zonke zinesitayile, zithwele, zinomtsalane kwaye zikwadumile; Ngabantu abadumileyo kunye namadoda azizityebi. Ukutyhubela iminyaka ukubonakala kwamadoda angenazo iinwele kuye kwaba phantsi. Abaninzi babenengqumbo yokungafumani iyeza lemvelo lokubanceda, kodwa abanye namhlanje sele bebonakalisa ubuntu babo nenkqayi ngalo lonke ikratshi labo.
Sinayo ukutshintshwa kweenwele njengelona nyango lokusombulula inkqayi kwaye sinamadoda adumileyo anemali kunye nethuba lokusebenzisa unyango. Kodwa kude kuyo yonke le nto bathanda ukukhupha icala labo elinomtsalane ukuba njengoko zinjalo. Abanye bade bajonge nendlela yokuyinxiba imfutshane okanye bayichebile, kuba sikwixesha elitsha lokuhlaziya kwaye ukuba unesibindi kusoloko kulungile ukuba nobuganga bokwenza izitayile ezitsha.
2 UJason Statham
5 UBruce Willis
6 UJonh Travolta
Ungumdlali wethu omhle nohlekisayo, odume ngaye uhambo lwakho kunye neemuvi zentshukumo. Uyindoda enemisipha kwaye uyaphumelela kwiindima zakhe ngenxa yokugcinwa kwakhe okukhulu komzimba. Ngokungathandabuzekiyo, uninzi lwezimvo zakhe zihlala zimelwe njenge indoda enempandla eqinileyo. Ungambona kwiimuvi ezidumileyo ezifana 'neLiwa' okanye 'Uhambo oluya embindini womhlaba'.
Ngomnye wamadoda ethu adumileyo anempandla azinikele kwi-cinema kwaye aziwa ngayo tolika imiboniso bhanyabhanya enentshukumo kunye neemeko ezininzi zokudubula. Yiba ubuso obunzima kwaye ngaphandle kwamathandabuzo ukuba iinwele zakhe ziphucula umlingiswa wakhe. Waziwa kwiimuvi ezifana 'neTransporter' kunye ne 'Crank: High Voltage'.
Es umdlalo odumileyo webhola yomnyazi kwaye wenze umboniso kwimuvi. Inkangeleko yakhe ibisoloko ingumlinganiswa othe ngokuyinxenye wazisa udumo kumfanekiso wakhe, esoloko engenazo nwele. Kumele ahlonitshwe ngamaxesha akhe ali-13 kunye neChicago Bulls, ephumelele amakhonkco amathandathu. Siyayithanda inkangeleko yabo kwaye iye yaba lukhuselo ukuya kumaxesha angama-50 kwiphephancwadi lezemidlalo elithi Sports.
Ubukho bakhe bendoda ezimiseleyo neyiyo ngumfanekiso ogqibeleleyo wabo idrama kunye nemiboniso bhanyabhanya. Ngenxa yoko, umfanekiso wakhe wendoda enenkqayi uyamthanda yaye asinakuqhela ukumbona enenkalo eyahlukileyo. Siyamazi njengomdlali wemiboniso bhanyabhanya efana nethi 'IziKronike zikaRiddick' kunye 'Ukukhawuleza nokucaphuka'.
Sonke siyamkhumbula uBruce Willis kunye neyakhe jonga indoda engenanwele enomtsalane, esoloko enekratshi xa edubula yaye engaphoswa imigili. Besisoloko siyithanda inkangeleko yakhe eyomeleleyo, enomtsalane, kwaye uye wabonakala enomtsalane ngeefoti ezininzi zokufota. Sinokumkhumbula kwiimuvi ezidumileyo ezifana ne-'Pulp fiction', 'Ihlathi leglasi' kunye 'Nengqondo yesithandathu'.
Lo mdlali ebengasoloko echetyiwe. kodwa ukuba kwiminyaka yakutshanje umfanekiso wakhe ngowomntu onenkqayi. Ngokuqinisekileyo siyiqhelile inkangeleko yakhe entsha kwaye ukhangeleka emhle. Wenze imiboniso bhanyabhanya eyoyikekayo neyonwabisayo 'ngeGrezi', 'iPulp fiction' kunye 'neFiva yasebusuku yangoMgqibelo'.
Ikwabizwa ngokuba Zizou Yenye yeenkwenkwezi zethu ezidumileyo. Phantse sihlala sidibana nale nto Umdlali obalaseleyo webhola ekhatywayo onenkangeleko enzulu nenomtsalane ngaphakathi emasimini. Kwaye sele iyinxalenye yobuntu bakhe, ukubona uZinedine ngaphandle kweenwele entloko kwaye ngokuzidla ubonisa indlela avakalelwa ngayo. Wayeyi-'Ballon d'Or' kwi-1998 kwaye wabizwa ngokuba 'ngoyena mdlali wehlabathi ogqwesileyo' yiFIFA ukuya kuthi ga kathathu. Siyakukhumbuza kwakhona ukuba njani Umqeqeshi weReal Madrid ngamaxesha amaninzi apho waphumelela iindebe ezintathu zaseYurophu.
Ubuso bakhe baziwa ngokudlala indima kwi Umabonwakude waseBritani onabadlali abamangalisayo nanjengomhloli wamapolisa. Sonke siyamkhumbula uMarko njengendoda enzulu, ebonakala iqinile, ngombono ongene kakhuluKe, uninzi lweefilimu zakhe zidlala i-protagonist embi.
Kuwo onke la madoda adumileyo yiba luphawu lwendoda enempandla ayiyonto kwaphela, kuba ibathandele ukongama nobuhle. Kwiimeko ezininzi, le meko ifikelelwa ngenxa yokuba, njengomgaqo jikelele, ukungabikho kweenwele kubonakala ngakumbi kwaye kugqiba ukwenza ukucheba okupheleleyo kwentloko.
Siyazi ukuba ukucheba kurhabaxa kakhulu ukuba ungajonga isitayile okanye ukuchetywa kweenwele, kodwa kukho amadoda azama ukuphinda kwakhona ngenxa yokuba. ubanika ubuntu obuninzi. Ukuba uthanda ukufumana iinwele ezichetyiweyo kakhulu, unokuhlala uzama iinwele zegradient, ngaphandle kokufikelela ukucheba ngokupheleleyo. Ukugqiba ngeenwele ezicocekileyo nezichetywe ngokupheleleyo, kuphela imeko iya kuba zezo nwele zingaqhelekanga, kwaye ukugqiba ukunika imbonakalo ecocekileyo neyohlukileyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » fashion » Amadoda anempandla adumileyo